Anyị anaghị ana ụtụ ma ọ bụ otu ụzọ n’ụzọ iri. Ọ bụ eziokwu na ọrụ ikwusa ozi ọma anyị na-arụ na-efu anyị ezigbo ego, anyị anaghị eke ụtụ ma ọ bụ na-ebugharị efere. Anyị anaghịkwa arịọ ego. Mgbe anyị malitere ibi magazin anyị a na-akpọ Ụlọ Nche, anyị kwuru ná mbipụta ya nke abụọ na obi siri anyị ike na Jehova ga na-akwado anyị. Anyị kwukwara na anyị agaghị arịọ ndị mmadụ ego. Ruokwa taa, o nwebeghị onye anyị rịọrọ arịrịọ.—Matiu 10:8.
E ji onyinye si ndị mmadụ n’obi akwado ọrụ anyị. Ozi ọma anyị na-ekwusa n’ụwa niile na-atọ ọtụtụ ndị ụtọ, ha na-enyekwa anyị onyinye. Anyịnwakwa na-eji obi ụtọ ewepụta oge na ike anyị arụ ọrụ a. Anyị na-enyekwa onyinye iji kwadoo ya. (1 Ihe E Mere 29:9) N’Ụlọ Nzukọ Alaeze, e nwere igbe ndị ọ ga-abụ onye chọọ, ya agaa tinye ego ọ chọrọ inye n’onyinye. Ego a na-enweta n’igbe ndị ahụ na-abụkarị ego ndị dara ogbenye ji obi ha niile nye. Ha na-eme ihe ahụ otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye mere n’oge Jizọs. N’agbanyeghị na ego o tinyere n’igbe onyinye bụ mkpụrụ ego abụọ ga-azụtali ihe dị ntakịrị, Jizọs jara ya mma. (Luk 21:1-4) N’ihi ya, onye ọ bụla n’ime anyị na-ewepụta ihe ọ ga-enye n’onyinye. Ma, ọ na-abụ “dị ka o kpebiri n’obi ya.”—1 Ndị Kọrịnt 16:2; 2 Ndị Kọrịnt 9:7.
Obi siri anyị ike na Jehova ga-eme ka ndị chọrọ iji ‘ihe ha ndị dị oké ọnụ ahịa sọpụrụ ya’ na-enye onyinye maka ọrụ ozi ọma a anyị na-arụ. Anyị ga-arụgide ya ruo mgbe Chineke ga-asị na o zuola.—Ilu 3:9.
GỊNỊ KA E JI EGO E NYERE N’ONYINYE EME?
Ị bịa n’Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị, ị ga-ahụ igbe e dere Local Congregation Expenses. A na-eji ego ọ bụla e nwetara na ya ahụ maka ihe ọ bụla ọgbakọ chọrọ iji ego eme. Ọ bụkwa ebe ahụ ka e si enweta ego a na-ezigara alaka ụlọ ọrụ maka Ụlọ Nzukọ Alaeze ha rụụrụ anyị nakwa maka ndị nke ha rụziiri anyị. Igbe ọzọ dị n’Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ nke e dere Worldwide Work. A na-ezigara alaka ụlọ ọrụ ego ọ bụla a hụrụ n’ime ya ka ha were ya mee ihe ndị e ji ego eme n’alaka ụlọ ọrụ. E nwezie nke fọrọ, ha ezigara ya ụmụnna anyị ndị nọ ná mba ọzọ.
mailto:?body=Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Enweta Ego Ha Ji Arụ Ọrụ Ikwusa Ozi Ọma n’Ụwa Niile?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012165%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Enweta Ego Ha Ji Arụ Ọrụ Ikwusa Ozi Ọma n’Ụwa Niile?